Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 499413 times)
« Reply #760 on: December 09, 2011, 01:28:59 PM »
ဆရာဝန် ................ငါတို့ တိုင်းပြည် အခြေအနေ ကောင်းပြီ ။။။။။။။။။။
« Reply #761 on: December 10, 2011, 10:27:28 PM »
တခါက အကြီးအကဲသည် စိတ္တဇဆေးရုံသို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့သည်။
ဆေးရုံရှိ လူနာများက အကြီးအကဲကို တွေ့သည်နှင့်.. ” အကြီးအကဲ ကျန်းမာပါစေ… နေကောင်းပါစေ…. သက်တော် ရှည်ပါစေ…” ဟု ကောင်းချီးပေးကာ ကြိုဆိုကြသည်။
သို့သော် ထိုလူနာတစ်ဦးမှာ ဘာမှမပြောဘဲ အကြီးအကဲအား မျက်နှာလွှဲပြီး နေသည်။ အကြီးအကဲက မြင်သော်.....
” ဒီလူနာက ငါ့ကိုမြင်တာ တောင် မကြိုဆိုပါလား” ဟု ဆေးရုံအုပ်အား မေးလိုက်သည်။
“ဒီနေ့ လူနာရဲ့ စိတ်အခြေအနေကောင်းနေတယ်” ဟူ၏။..................
« Last Edit: December 13, 2011, 10:10:32 AM by tunaye2011 »
« Reply #762 on: December 13, 2011, 09:52:38 AM »
မိန်းမတို့အရွယ် (5)မျိုး (FB ကရတာ............ )အူးထွန်းရေ ......... ချိပီးတာ ချိုယဲ ဖက်လိုက်နော်..... အဲ လေ ဖျက်လိုက်နော်....
ပထမအရွယ် (ဘောလုံး) ခေတ်ကောင်းချိန်ပေါ့။ တစ်ဖက်ကို ၁၁ ယောက်စီနဲ့ စုစုပေါင်း ၂၂ ယောက် အသည်းအသန် လုနေရတယ်။ ကိုယ်လက်ထဲရောက်လာရင် သူများလက်ထဲပါမသွားရအောင် ဂရုစိုက်ရတယ်။ အဲဒီ ကွင်းထဲက ၂၂ ယောက်က တစ်ယောက်နားရရင်လဲ အစားဝင်မယ့်သူ က နောက်ထပ် တစ်သင်းစာ အဆင်သင့်ရှိနေတယ်။ ကွင်းအပြင်က ပရိသတ်ကလဲ ကွင်းထဲမှာ ကစားနေသူတွေကို အထင်ကြီးအားကျတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ပေါ့။ ဘောလုံးက နာမည်ကြီးရင်ကြီးသလို ရုပ်မြင်သံကြားပရိသတ်ကလဲ သန်းချီရှိသေးတယ်။ ကျောင်း၊ အလုပ်၊ သင်တန်း ဘယ်သွားသွား စာလိုက်ပေးတဲ့သူ၊ ရည်းစား စကားလိုက်ပြောတဲ့သူအပြည့်ပေါ့။
ဒုတိယအရွယ် (ဘတ်စကတ်ဘော) ဝင်ပြီးလုတဲ့လူ တစ်ဝက် (၆) ယောက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် အသည်းအသည်တော့ လုနေရတုန်းပဲ။ ပရိသတ်ကလဲ ဒီလောက်မများတော့ဘူး။ ရည်းစားစကားလိုက်ပြောတဲ့သူတွေတော့ ရှိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သွားသွားတော့ မဟုတ်တော့ဘူး။ ကိုယ်နဲ့ ကျောင်းအတူတူ၊ အလုပ်အတူတူ၊ နီးစပ်တဲ့သူတွေထဲကပဲ။
တတိယအရွယ် (ဘော်လီဘော) ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ကြာကြာမထားတော့ဘူး။ မြှောက်တင်တယ်။ ပြီးရင် သူများဘက်ကို ရိုက်ချရတယ်။ အပျိုကြီးလို့ စပြီး မထိတထိ အခေါ်ခံရတဲ့ အချိန်ပေါ့။ ချောသေးတယ်၊ လှသေးတယ် မြှောက်ပေးကြတယ်။ ပြီးတော့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်နားက လူပျိုကြီးဆိုသူတွေထံကို ရိုက်ချကြတယ်။
စတုတ္ထအရွယ် (တင်းနစ်ဘောလုံး) ကိုယ့်ဘက်ကို ဘောလုံး တစ်ချက်ထက်ပိုအကျမခံတော့ပဲ ပြန်ရိုက်ထုတ်တော့တာပဲ။ ဟိုဘက်ကလည်း သူ့ဘက်ကိုအကျမခံ အသည်းအသန် ပြန်ရိုက်ထုတ်တာပဲ။ အပျိုကြီးလာပြီဟေ့ ဆိုတာနဲ့ လူပျိုလေးတွေကော၊ လူပျိုကြီးများပါ ထပြေးရတဲ့ အချိန်ပေါ့...
ပဉ္စမအရွယ် (ဂေါက်သီး)တစ်ယောက်ပဲရှိတော့တယ်။ သူကလဲဘယ်လောက်ထိ ဝေးအောင်ရိုက်နိုင်မလဲဆိုပြီး လွှဲရိုက်ဖို့ပဲပြင်နေတော့တယ်။ ဝေးလေကောင်းလေပဲ...
« Last Edit: December 13, 2011, 10:09:06 AM by tunaye2011 »
« Reply #763 on: December 16, 2011, 08:36:22 PM »
တကယ်လို့များ Animals တွေလည်း facebook ကိုသုံးတတ်ကြပြီဆိုရင်
သူရို့ဒွေရဲ့ Status Updates တွေက ဒီလိုတွေများဖြစ်ကြမလားဘဲ......
ငါ့ရဲ့(၇)ကောင်မြောက်ခလေးက သူ့အဖေဘယ်သူလဲဆိုတာကို လာမေးနေတယ်.. ငါသူ့ကိုဘယ်လိုပြန်ပြောရမလဲ..ငါကိုယ်တိုင်တောင်မသိတဲ့ဟာကို ;-)
ငါတော့ HIV Positive ဖြစ်နေပြီဟေး.****ဆိုတဲ့မသာရဲ့သွေးကိုသွားစုပ်မိတာလေ.... !!! :-O
မနက်ဖြန်ကျရင် ငါလာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်.., စီပီကြက်ကင်ဆိုင်မှာငါ့အလှည့်ကျတယ်..
မင်းတို့အားလုံးကိုသတိရနေမှာပါနော်... <3 ခွေး :
ငါ့ရဲ့သခင်မက ..ငါ့ကို..ညညကျရင် သူ့အခန်းထဲခေါ်ခေါ်အိပ်တယ်ဟ...ဟူးရား..ဟဟ !! ^_^
အိုးမိုင်ဂေါ့..ငါ့ကြောင့်တုတ်ကွေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီး..လူတွေအတင်းတုတ်နေကြတယ်... WTF! :-O
သူငယ်ချင်းဆိတ်အပေါင်းတို့ရေ..အပြင်မထွက်ကြနဲ့နော်....ကုလားတွေ အစ်( Eid ) လုပ်တော့မယ်ဟ :-(
ကိုကိုဝက်က မမဆိတ်ရဲ့ Status ပေါ်မှာ Comment (1) ကြောင်းလာရေးသွားပါသည်။
"၀က်ဖြစ်ရတာ ဒီအချိန်မှာကံကောင်းလိုက်တာနော်...." |4Likes
" ကုလားအစ်ပြီးရင်...Chinese New Year..လာမယ်ဆိုတာ မင်းတကယ်မသိတာလား ?
11 Likes Comments :-)
Credit to original uploader @ FM
« Reply #764 on: December 17, 2011, 08:21:21 PM »
ကျွန်တော့်စိုက်ခင်းကအပင်ေ တွကို နင်းမိမှာစိုးလို့ပါ”
“ဟေ့ သူငယ် မင်းကျောင်းသားလား”
“ဟင့်အင်း ကျွန်တော် တက္ကသိုလ် တက်နေပြီ”
“အော် အော် ကျောင်းသားဘ၀ကကျော်လို့ ကျောင်းသူနားရောက်သွားပြီကိုး”
တုန့်ပြန်မပြောသေးဘူး ကဲ ဒါဆိုလည်း ကိုယ်ပြန်ပါတော့မယ် နောက်ဆုံးခင်မင်မှု
“ရှင်ထိုင်နေတဲ့ ကုလားထိုင်က စောစောကမှ ဆေးသုတ်ထားတာ
« Reply #765 on: December 18, 2011, 08:45:29 AM »
ကိုသောင်းမြ ကုန်းကုန်း ကုန်းကုန်းနဲ့ ရှာရင်း
မိန်းမရေ...........စောစောက ငါအိမ်ရှေ့မှာ ပြင်ဖို့ထားခဲ့တဲ့ စက်ဘီးဂွေတွေေ၇ာ......
မိန်းမ။ စောစောက ရှင့်သမီး နားကွင်းလုပ်ဝတ်သွားတယ်။ တဲ့။
« Last Edit: December 30, 2011, 10:56:41 AM by tunaye2011 »
« Reply #766 on: December 22, 2011, 05:06:09 PM »
FACE BOOK မှ ဖြစ်ပါသည်။
(ခရက်ဒစ် တူ ဘလူးကြီးအောင် )
တောကလာသော အဖိုးကြီးတစ်ယောက် ရန်ကုန်သို့ရောက်ပြီးနောက် ဘုရားသွားရန်အတွက် လိုင်းကားတက်စီးသည်...
ဘေးခုံတန်းတွင် တစ်နေရာစာထိုင်လို့ရနိုင်သည်ကိုတွေ့သဖြင့် ထိုင်နေသောမိန်းကလေးအား ပြောလိုက်သည်...
"ဘာ..... ရှင် ရိုင်းလှချည်လား ...... အသက်ကိုမှ အားမနာ... မဖယ်ပေးနိုင်ဘူး....ဟွန်း.."
« Reply #767 on: December 22, 2011, 07:02:13 PM »
ဆရာမက ကလေးများကို အသဲပုံဆွဲနည်းသင်ပြပေးနေသည်။ " သားတို့သမီးတို့ ဆရာမ ကျောက်သင်ပုန်းမှာဆွဲပြတဲ့အတိုင်း လိုက်ဆွဲနော်"။ ကလေးများကလည်း ဆရာမဆွဲပြသည့်အတိုင်းလိုက်ဆွဲကြသည်။ အဲဒီကလေးများထဲတွင် ကလေးတစ်ယောက်က အသဲပုံတွင် ခြေထောက်ပုံပါထည့်ဆွဲနေသည်ကို ဆရာမကမြင်သွားသဖြင့်..
ဆရာမ - "သားရဲ့အသဲပုံက ဘာလို့ခြေထောက်ပါနေရတာလဲ သားရဲ့"
ကလေး - "အသဲမှာ ခြေထောက်ပါတာပေါ့ဆရာမ"
ဆရာမ - " ဘာလို့ပါရတာလဲသားရဲ့"
ကလေး - "ညတုန်းက ဖေဖေက မေမေ့ကို ပြောတယ် အသဲ ခြေထောက်နည်းနည်းကားပေးတဲ့ "
« Reply #768 on: December 23, 2011, 12:02:41 PM »
ရှိပြီး ဖြစ်သဖြင့် ဖျက်ပါသည် ။
« Last Edit: December 23, 2011, 02:42:25 PM by tunaye2011 »
« Reply #769 on: December 25, 2011, 07:11:49 PM »
credit to forword mail
« Last Edit: December 26, 2011, 09:14:52 AM by tunaye2011 »